ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိမှု အန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း - First Myanmar Investment Public Company Limited
ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင် ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကတန်ဖိုးထားမှုများ၊ မူဝါဒများနှင့် မှန်ကန်သော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို အခြေခံ၍ အမျှော်အမြင်ရှိသည့် စွန့်စားမှုကို အခြေခံသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်သည့်၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိမှုများကို စီမံခန့်ခွဲသည့် အလေ့အကျင့်တစ်ရပ်ကို တည်ဆောက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုအလေ့အကျင့်ကို ဝန်ထမ်းများသိရှိလာအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ များ လျော့ပါး အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ကုမ္ပဏီများအုပ်စု၏ လုပ်ငန်း အားလုံးတွင် ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အမှန်တကယ်ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုမီတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ၊ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာနှင့် မဟာဗျုဟာကျသည့် အဓိကဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို ဖေါ်ထုတ်ပြီး လျော့ပါး သက်သာ အောင် ပြုလုပ် နိုင်ရန်အတွက် အလားအလာရှိသော ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို အကဲဖြတ် သုံးသပ်ခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အဂတိလိုက် စားမှု ဆန့်ကျင်ရှောင်ရှားရေး ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ မူဝါဒနှင့်အညီ ကုမ္ပဏီတွင်း နှစ်စဉ်စာရင်းစစ်ဆေးမှု အစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် Fraud Risk Assessment (လိမ်လည်မှုကို အခြေခံသည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း) ကို ကုမ္ပဏီအုပ်စုတစ်ခုလုံး အတိုင်းအတာ ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိမှုများအပေါ် လက်ရှိထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ၏ ထိရောက်မှုများကို သုံးသပ်ရန်၊ လိုအပ်ပါက ပြုပြင်ရန်၊ ဆုံးရှုံး နိုင်ခြေရှိမှုများ၏ ပုံစံ ပြောင်းလဲ နေမှုများကို သုံးသပ်ရန် တို့အတွက် နှစ်ဝက်နှင့် နှစ်စဉ် enterprise risk assessment (လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အကဲဖြတ်ခြင်း) များကို လုပ်ဆောင်လျှက် ရှိပါသည်။
ကုမ္ပဏီအတွင်း ထိရောက်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရှိစေရန် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှု မူဘောင်မှ ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ အားကောင်းသော ကော်ပိုရိတ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ပေးလျက် ရှိသည်။ ထို ကော်ပိုရိတ် စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ အဓိက မဏ္ဍိုင်ကြီး (၅) ရပ်ဖြစ်သည့် ပေါ်လစီများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အတွင်းအပြင် စာရင်းစစ်မှုများ၊ အကဲဖြတ် သုံးသပ်ချက်များ၊ လိုက်နာမှုရိမရှိ စောင့်ကြည့်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှုတို့မှ အထောက်အကူ ပြုထား ပါ သည်။ ထိုမဏ္ဍိုင်များကို စာရင်းစစ် နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တို့မှ ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲ လျက်ရှိပါသည်။
ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိမှုပေါ် အခြေပြုသော ကုမ္ပဏီတွင်းစာရင်းစစ်မှု
ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိမှုပေါ်အခြေပြုသော ကုမ္ပဏီတွင်းစာရင်းစစ်မှု (Risk Based Internal Audit) သည် ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲခြင်းအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်နေသော အဓိကလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စည်းစနစ်ကျသော သုံးသပ်စစ်ဆေးချက်ဖြင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ပိုမိုထိရောက်မှု ရှိလာစေရန် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု မူဘောင်တို့ကိုဖြင့် ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲပါသည်။
က။ ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ရည်မှန်းချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်သည့် ကုမ္ပဏီအုပ်စုအတွင်း ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိမှုများနှင့် ကုမ္ပဏီပြင်ပ ဆုံးရှံးနိုင်ခြေရှိမှုများအား ဖော်ထုတ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။
ခ။ ကြုံတွေ့နေရသည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိမှု အတိုင်းအတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် တွေ့ရှိထားသော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိမှုများ၏ အဆင့်များကို လေ့လာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။
ဂ။ တွေ့ရှိထားသည့် ဆုံးရှံးနိုင်မှုရှိသည်များကို ရှိရင်စွဲထိန်းချုပ်မှုများ (သို့) နောင်တွင်ရှိလာမည့် ထိန်းချုပ်မှု အစီအစဉ်များဖြင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသမျှ ဖြေရှင်းခြင်း။
ဃ။ တွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိမှုများ၏ အရေးကြီးမှု အနေအထား ပြောင်းလဲမှုများ ကို လေ့လာ စောင့်ကြည်ခြင်းနှင့် အသစ်ထွက်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိမှုများကို သိရှိအောင်လုပ်ခြင်း။
င။ စာရင်းစစ်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သို့ အရေးကြီးသော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိမှုများနှင့် ရှိရင်စွဲထိန်းချုပ်မှုများ (သို့) နောင်တွင်ရှိလာမည့် ထိန်းချုပ်မှု အစီအစဉ်များကို ပုံမှန်အစီရင်ခံ တင်ပြခြင်း။
Over the years, FMI assessed various risks it is exposed to. The diagram below indicatesasnapshot of FMI’s evolving risks.
Five major risks identified are affecting FMI’s ability to create value over the short, medium and long term.
5 major risks have been identified to
provideamore integrated approach.
Common Healthcare Sector Risk
5 MAJOR RISK CATEGORIES
Inadequate IT Governance
Political, Economic and Social Instability
Environmental and Social / Health and Safety Risk
Long Term Profitability and Net Margin
Cash Flow and Funding Risk
Changes in Legislation and Policies